Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - ဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ Porn-သွေးဆောင် ED (2013) စုံစမ်းစစ်ဆေး
အသုံးပြုသူအပေါ် Porn ၏ဆိုးကျိုးများ
ဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ Porn-သွေးဆောင် ED (2013) စုံစမ်းစစ်ဆေး
UPDATE: တာ Dr.OZ ဇာတ်လမ်းတွဲကတည်းကဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
ကြည့်ပါ - သုတေသနနုပျို ED အတွက်ကြီးမားမြင့်တက်အတည်ပြု.
ညစ်ညမ်းသော ED ကိုကုသသော၊ အသိအမှတ်ပြုသောကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏ဤစာရင်းဆောင်းပါးများကိုကြည့်ပါ။ မီဒီယာ porn-သွေးဆောင် ED (ကျွမ်းကျင်သူများက)
အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များအားဖြင့် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) - ဒါဟာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါစက္ကူကိုလည်းညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများကို examine ။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။
ဆောငျးပါး: porn-သွေးဆောင် ED ရောဂါဆေးဝါးကုသမှုတရားဝင်မှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နှစ်များစွာကြာအောင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောမုန်တိုင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ပင်မအသိပညာကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပုံမှန်အင်တာနက် porn အသုံးပြုသူများသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဇင်မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိုင်ကြားလာကြသည်။ လိင်မှုကိစ္စတိုးမြှင့်ဆေးများသည်ပြreliefနာမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်သက်သာရာမရခဲ့ပါ ဦးနှောက်၏အလိုဆန္ဒဆားကစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအလုပ်လုပ်သောခါးပတ်အောက်တွင်မ။ သို့သော်စောင့်ရှောက်သူများသည်ယခုအထိမသိသေးပါ။
ကျနော်တို့ porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး blogged ယနေ့စိတ်ပညာ "ပေါ်တွင်ဤနေရာတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည် post ကိုကြည့်ရှုသူတစ်သန်းနီးပါးရှိခဲ့သည်။ ယောက်ျားများစွာသည်ဤပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြသည်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပြောရလျှင်ပြreportingနာများ၏ခြင်္သေ့ဝေစုဟာသူတို့နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလများမှာဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ED နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြေအနေများ - ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊ တိကျသောဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းနှင့်မခံစားရပါ။
အခုတော့ဒေါက်တာ Oz နှင့်တစ်ဦးပါဝင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဆီးရောဂါပါရဂူ (မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ဒါရိုက်တာနှင့်တက္ကသိုလ်မေရီလန်း Medical School ကျောင်းတွင်ဒြေ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး) နှင့် စိတ္တဇရောဂါဆရာဝန် ကရှင်းပြသည်ပါပြီ ဘယ်လို အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့်ရှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသူများအ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြတ်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ reverse နိုင်ပါတယ်။
အားလုံး protocol အသစ် - နှင့်ပိုကောင်းတဲ့စမ်းသပ်မှု
ဤမျှကြီးမားသောသတင်းကြီးရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာယခုအချိန်အထိစိတ်ရောဂါအထူးကုများနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုများအပါအ ၀ င်ဆေးဆရာဝန်များတွင် ED အတွက် protocol တစ်ခုသာရှိသည်ဟုထင်ရခြင်းဖြစ်သည် - သူတို့ကလူနာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်အတွင်းစိုက်ထူမှုရနိုင်မနိုင်မေးမြန်းခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆေးကုသမှုအခြေအနေများသည်“ ဟုတ်ကဲ့” ဖြစ်သည်။ နိဂုံးချုပ်? သာ "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်" ပြ ”နာ ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ လူနာအား Viagra သို့မဟုတ် Cialis ဆေးစမ်းသပ်မှုနှင့်သူ၏လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများနောက်ကွယ်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကိုဆွေးနွေးရန်အကြံပေးတစ် ဦး အားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်အတွင်းစိုက်ထူမှုမရရှိခြင်းကြောင့်လူငယ်တစ်ယောက်တွင်“ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများ” ရှိကြောင်းကိုလည်းပြသရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ )
တိုတိုမှာစံ protocol ကိုအရသိရသည် ED ပြဿနာများပိုက်-ဆက်စပ်သို့မဟုတ်တင်းကြပ်စွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်အချို့ နမူနာအစီရင်ခံစာများ သူတို့အကူအညီနဲ့ရှာကြသောအခါယောက်ျားတွေကြုံတွေ့ဘယ်သို့သောအကြောင်း:
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: ငါဆရာဝန်များစွာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောရုံးခန်းလည်ပတ်မှုများ၊ အခုဆိုရင် ၇ နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီ။ ၁၇ ရက်ကြာမှညစ်ညမ်းတဲ့ပုံမရှိဘူး။ ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်
ဒုတိယအကောင်လေး: ငါ PMO တက်ပေးခြင်းစတင်တစ်နှစ်ကြာမှီ, ငါပင်ငါသဘောတူညီခဲ့ဘယ်တော့မှသောပြင်းထန်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ငါ့ကိုရောဂါသူကိုစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်စိတ်ပညာရှင်ကြည့်ဖို့ သွား. , စိတ်မကျဆေး Antidepressants ပေါ်မှာငါ့ကိုထားချင်တယ်။ ငါသည်ငါ၏စိတ်ကို 24 /7ခဲ့သောငါ၏အသက်တာ၏ဗဟိုပြဿနာ (ED, အစစ်အမှန်မိန်းမတို့အားတုန့်ပြန်မရှိခြင်း) ပြောင်းပြန်နိုင်ထွက်ကိုတွေ့သောအခါ, အပြင်းထန်ဆုံးရော့ခ်ငါ့နှလုံးကနေရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံး NoFap Streak (cca 80 ရက်) ရက်နေ့တွင်သွားသောအခါကျွန်မအခြားသူများအစီရင်ခံအဖြစ်အလားတူစူပါအင်အားကြီးကိုသတိပွုမိတော့တာပဲ။
တတိယကောင်လေး: ငါ ED ဆေးများအားလုံးကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါဆီးချိုရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ထံအကြိမ် ၅-၆ သွားခဲ့တယ်။ ငါလိင်ကုထုံးကြိုးစား, သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီမှာကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ယခုငါတို့သိသည့်အတိုင်းအမှန်တရားထွက်လှည့်သွားသည်။
စတုတ္ထကောင်လေး: ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မတိုင်မီငါသည်ငါ့ porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစွဲအကြောင်းကိုငါ့အကုထုံးကိုပြောသည်။ သူကထိုသို့သောအမှုကိုမတည်ရှိနိုင်ကြောင်းငြင်းဆိုခြင်းနှင့်ကိုယ့် porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတခါ masturbate ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
ပဉ္စမကောင်လေး: (အသက် ၃၈ နှစ်) လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည် MRI ကဲ့သို့သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၊ ကျောရိုး - ကျောရိုးအရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ endocrine ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ငါ့ကိုဘယ်သူမှညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းစေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါဒီမှာတကယ့်ပြproblemနာရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ ယခုငါစကားလုံးပြန့်နှံ့ရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်နေသည်။
ဆဋ္ဌမကောင်လေး: (အသက် ၅၁ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည် ၆၅ ရက်ပတ်လုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ Viagra ကိုတောင်မကူညီဘူးဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာတယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျနှင့်အပူတပြင်းလာပြီခဲ့သည်။ ငါ ED လပေါင်းများစွာရှာဖွေနေသည်။ ဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များကိုဖြတ်ထုတ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ ကြွက်သားထုထည်တိုးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုလက်စထရော၊ ငါကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအသက်ရှင်ဖို့ရှိတော့မည်၊ အိုမင်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုစတင်စဉ်းစားလာသည်။ ငါအပြာပေါ်အအေးကြက်ဆင်ကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ငါအနည်းငယ်လွဲချော်ကြပြီမဟုတ်။ အကယ်၍ porn ကကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်လိင်မှုကိစ္စဆုံးရှုံးစေလျှင်၎င်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ အကြှနျုပျ၏ပြန်လည်နာလန်ထူတက်နှင့်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များကကျွန်ုပ်၏မနက်ခင်းစိုက်ခင်းများသည်တသမတ်တည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်နှစ်များတွင်ငါမလုပ်ခဲ့သောခဲယဉ်းသောစိုက်ထူမှုများရရှိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုတစ်ချိန်လုံးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သုတ်ရည်လွှတ်မှုဟာပိုပြီးလွယ်ကူလာပြီးအများကြီးပိုကောင်းလာတယ်။ လိင်မှုကိစ္စသည်လည်းနောက်တဖန်ပြန်လာနေသည်။ ငါလိင်အတွက်စိုက်ထူရန်ခက်ခဲသောအချိန်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ထုံထိုင်းနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတယ်
သတ္တမကောင်လေး: Porn သည်လူတစ် ဦး ၏လိင်အရသာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်၏လျှပ်စီးမြန်ခြင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ porn ကကျွန်မကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွမ်းကျင်သူတချို့ကိုမေးတယ်၊ နှင့် "porn သင့်ရဲ့အရသာကိုပြောင်းလဲနိုင်သလား"? ပြီးတော့“ နah၊ မင်းငါ့သူငယ်ချင်းပဲ။ ဒါပုံမှန်ပါပဲ ဒါကောင်းပါတယ်။ ”
အဋ္ဌမကောင်လေး: တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်ဤပြproblemsနာများ (လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိုက်ထူခြင်းပြcausingနာများ) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်အမြဲတမ်းခံစားမိသည်။ ငါ medhelp.com မှာဆရာဝန်တွေတောင်မှမေးတယ်။ သူတို့အားလုံးကကျွန်တော့်ကိုရယ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကကျန်းမာတယ်၊
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်အပြောင်းအလဲများဖြစ်နိုင်ခြေကိုယေဘူယျအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြောင်းထင်ရှားသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, သေး ဦးနှောက်အတွက်, နှင့်ဆက်စပ် desensitization အမြန်နှုန်းမြင့် porn ၏ supernormal stimulation အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်း၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူ၏လိင်မှုဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုကိုတုံ့ပြန်မှု၏။ (ကြည့်ပါ "Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် Porn" ဗီဒီယိုစီးရီး အဆိုပါဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ကွယ်ကဇီဝြဖစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို။ )
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပြproblemsနာများကိုအကဲဖြတ်ရန်သိသာထင်ရှားသည့်မေးခွန်းမှာ“ သင်သည် porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်သည့်အခါသင်၏စိုက်ထူမှုသည်မည်သို့ရှိသနည်း” ဖြစ်သည်။ တစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း မပါဘဲ porn, သေးတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန် နှင့် porn, စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ဆန့်ကျင်အဖြစ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရားခံကြောင်းဖော်ပြသည်။ (ကြည့်ရှုပါ အပြည့်အဝစမ်းသပ်)
ဒီနေ့သုံးစွဲသူများသည်ဖြစ်နိုင်သည် သူတို့ရဲ့လိင်သဘာ rewiring တိကျသောနှိုးဆွမှုပုံစံ (လိုအပ်သောအမြင်အသစ်နှင့် voyeur ၏ရှုထောင့်) လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အမြန်မြန်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစံဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သောသဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည် သဘာဝအမွတ်မပြေနိုင်သော override အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ပြဿနာများကိုမြှင့်တင်ရေး။
သတိပြုသင့်သည်မှာအချို့သောဆရာဝန်များသည်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားများအားမေးမြန်းသောအခါထိုအရာကိုမသိခဲ့ပါ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ သူတို့ရဲ့ပညာရေး၏အလားအလာအကြောင်းမရှိအဖြစ်သူတို့တကယ်အကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်းခံခဲ့ရ အင်တာနက်ကို porn + တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ လူငယ်များအတွက်ဤဝေါဟာရများသည်မကြာခဏအဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့တရားခံ (အမြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ) ကိုသတိမပြုမိဘဲထွက်သွားတယ်။ Viagra နှင့်အကြံပေးမှုသည်အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ - အခြေခံအကြောင်းရင်း (ဦး နှောက်အတွင်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ) ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် - ယောက်ျားများသည်သူတို့၏ဘဝအတွက်ကျိုးပဲ့သွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာသောယခုပြောင်းလဲနေပါတယ်။ တကယ်တော့ပြပွဲအပေါ်ဆရာဝန်များ desensitization overstimulation ကနေပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mechanics ရဲ့ရှင်းပြ၏အတော်လေးကောင်းတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ပါ။ အားလုံး overstimulation ဦးနှောက်၏ synapses အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးမှတုံ့ပြန်မှု deadens ကြောင်းသဘောတူသည်။ အပါအဝင်ကပြောပါတယ်အခြား neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများ ာင်း နှင့် hypothalamus ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲဖို့အလုပ်မှာဖြစ်ရမယ်။ Desensitization ဆေးကိုစွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်တွေ့ရသော်လည်းဤလက္ခဏာများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ထူးခြားသည်။
အသက်အရွယ်-မှီခိုအကြံဉာဏ်ကို - ပြပွဲမှာရှိတဲ့စုံတွဲဟာလက်ထပ်ပြီး၊ ဆရာ ၀ န်များက၎င်းသည်ယောက်ျားသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတစ်လအတွင်း porn / masturbation မပြုသည်အထိအာမခံပေးလိမ့်မည်။ ထိုသူသည်စွဲလမ်းမှုမရှိသေးဟုယူဆလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ယောက်ျားအများစုသည်တစ်လထက်ပိုလိုပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစောစီးစွာစတင်သောယောက်ျားများသည်သူတို့၏လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ခြောက်လမှကိုးလအထိလိုအပ်သည်။ ကြည့်ပါ Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်
စွဲလမ်းမဖျောပွထား - ပြပွဲသည်စွဲလမ်းနိုင်မှုနှင့်ယင်း၏ခေါင်းမာသောဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလျစ်လျူရှုသည်။ ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမဟုတ်တော့-ရေရှည်တည်တံ့။ အမှန်စင်စစ်တာဝန်မဲ့သည့် panel ကိုအပေါ် sexologist, သူ၏အကြံပေးချက်ကို back up လုပ်ထားဖို့ဘာမှမပါဘဲ, လူပြန်လည်ကောင်းမွန်ထားပြီးတခါ porn အသုံးပြုမှုကိုပြန်သွားဖို့စုံတွဲများအားပေးထားသည်။ မယုံနိုင်စရာ။ ယောက်ျားတွေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆေးပညာအခွအေနေကနေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနှင့်ညစ်ညမ်း-မေတ္တာရှင် sexologist ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုပြန်သွားဖို့သူတို့ကိုပြောထားသည်? စွဲလမ်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဆရာဝန်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကပိုင်မှတ်ချက်ချအဖြစ်,
“ ညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာကိုကင်းသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့တူတယ်။ porn သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလိင်မဟုတ်ပါ; ၎င်းသည်ကိုကင်းကဲ့သို့ supranormal လှုံ့ဆော်မှုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်အလွယ်တကူထွက်ခွာခြင်းမရှိပါ။ တဲထဲမှာတစ်ခုတည်းသောကုလားအုတ်ဖြစ်ချင်တယ်။ ”
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကဆရာ ၀ န်တွေကဆေးစွဲတာကိုမဖော်ပြပေမယ့်“ desensitization” နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ရှင်းပြချက်တွေကသူတို့နဲ့သဘောတူတယ် အများပြည်သူကြေညာချက် ၏ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society။ porn-related ED ကိုတွေ့သောလူတိုင်းသည်စွဲလမ်းမှုမရှိတော့သည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်သူသည်“ စွဲလမ်းနေသောလျှောစောက်၌” ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Desensitization ဖြစ်ပါတယ် တစ်ခုစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ် ဦး သည်စွဲလမ်းလာပါကစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်အဝေးကြီးလိုအပ်ရုံသာမကသူသည်အန္တရာယ်ကင်းစွာညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သူ၏ ဦး နှောက်သည်အစွန်းရောက်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတစ်ကြိမ်တုံ့ပြန်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ထပ်မံလှည့်ရန်ထပ်မံလှည့်ပါကသူသည်ကျည်ဆံသာဖြစ်သည်ဟုထင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။
ဖြစ်နိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးမှု - ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်များ၏ရှင်းလင်းချက်သည်များသောအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသော်လည်းယောက်ျားများအားစောင့်ကြည့်ခြင်းမပြုရန်အထူးသတိပေးခဲ့သည် porn သူတို့ရဲ့အချိန်ထွက်စဉ်အတွင်း။ ကြည့်ရှုသူများကမိမိကိုယ်ကိုထင်မြင်သည်ဟုထင်ကောင်းထင်ကြသော်လည်းယောက်ျားများကိုတစ်ချိန်လုံးမြင်တွေ့ရသည် r / nofap သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိုလိုလားလားငြင်းဆန်လိုသော်လည်း၊ သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်မှုမတွေ့ရဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနေသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Dr. Kramer မှအမျိုးသားများသည်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန်“ မိမိတို့၏လွှမ်းမိုးမှုမရှိသောလက်ဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ကိုစဉ်းစားရန်လူများကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ ဒါကရက်စွဲပါအကွံဉာဏျဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့လူငယ်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများက၎င်းတို့အားလုံးသည်လွှမ်းမိုးမှုမရှိသောလက်ဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်ရန်သင်ယူကြသည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏အဓိက ဦး စားပေး (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝါယာကြိုး) သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / အထွတ်အထိပ်မဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြစ်သည်ကိုညွှန်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
“ Flatline” သတိပေးချက်မရှိပါ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြပွဲတွင်လူငယ်များအနေဖြင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရန်အတွက်တစ်လထက်မပိုသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများလိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုမပြသပါ။ ဤလူငယ်ကောင်လေးဥပမာ, သူလိုအပ်ပုံကိုဆြေးြေိံး ကိုးလ အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်။ ပိုဆိုးတာကတော့လူငယ်တွေအများကြီးဟာ“flatlineED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူလာချိန်မှာ libido မရှိ၊ ဒါဟာရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာကြာရှည်နိုင်ပြီးများစွာသောသူတို့သည်တစ်လအကြာတွင်ဤအဆင့်၌ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့အပိုင်းကိုကြည့်ပြီး ဦး နှောက်ရဲ့ပုံမှန်အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုကိုပြန်ရဖို့အချိန်ပိုလိုတဲ့အခါသူတို့ဟာ“ ကျိုးပဲ့” တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းမရှိပါ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် Hyper-reactive ဆွနှင့် Hyper-ပလပ်စတစ်မှဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်း, သူတို့ဖြစ်ပါတယ် အသစ်သောလှုံ့ဆော်မှုမှအလွယ်တကူဝါယာကြိုး။ မျှော်လင့်တဲ့အနာဂတ်ဒေါက်တာ Oz အစိတ်အပိုင်းအတွက်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် အသက်အရွယ်နုပျိုသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဆင်းရဲဒုက္ခ နှင့်သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများ။ သူတို့၏ထူးခြားသောပြproblemsနာများစွာသည်၎င်းတို့သည်စူပါလှုံ့ဆော်မှုမြန်သောအမြန်နှုန်းပေါ်မှစတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အရေးကြီးသောကာလနှင့်ကြိုတင်အစစ်အမှန်လိင်ကြိုးစားနေဖို့နှစ်ပေါင်းကြောင့်သုံးပါ။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်လျော့နည်းပလပ်စတစ်ကြီးထွားအဖြစ်အစောပိုင်းလူကြီးများတွင်အချို့ကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်တုံ့ပြန်ရန်ရှာဖွေပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် - တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များသရုပ်ပြကြသည် dopamine ကိုတုပသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထုတ်လုပ်သောမြင့်မားသော arousal အခြေအနေများသည်တိရိစ္ဆာန်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်၊ လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့။ ဒီနေ့အမြန်နှုန်းမြင့် porn သည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကိုအားပေးသည် ဘယ်တော့မှအရင်ကဲ့သို့နှင့်သုံးစွဲမှုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်အချို့သောသုံးစွဲသူများတွင် dopamine များပြားလာခြင်းကိုသတိပြုမိစေသည်။ သေချာတာပေါ့၊ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်မတူညီသော erotica သို့အရှိန်မြင့်တက်မှုကိုအစီရင်ခံနေသည် သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ Parkinson ၏ dopamine ကိုတုပသည့်ဆေးညွှန်းများပေးသောလူနာများကလည်းသတင်းပို့သည် မျှော်လင့်မထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ နှင့် fetishes.
အခြားလက္ခဏာများကိုလျစ်လျူရှုထားသည် - ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါစိတ်ဖိစီးမှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုမရှိခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း, မျှော်လင့်မထားတဲ့ညစ်ညမ်းအရသာမှတင်းမာမှုလျှော့ချ, ဒါကြောင့်ထွက်။ ထိခိုက်နစ်နာသူတွေကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသိရန်အဘို့အဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် နိုင် မတူကွဲပြားသောရောဂါလက္ခဏာအတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Bravo ဒေါက်တာ Oz!
Viagra သို့မဟုတ် implants မလိုအပ်ဘဲ၊ ပြproblemsနာများသည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများမှမဖြစ်သည့်ယောက်ျားများသည်မှန်ကန်စွာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းကိုသိရခြင်းကအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အပိုဆောင်းအချိန်လိုအပ်ပြီး porn-induced ED နှင့် anorgasmia ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း / ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်သောလူငယ်တစ် ဦး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ TEDx ဟောပြောချက် -
TEDX ကညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာကို Gregor Schmidinger ကပြောပြသည်။
porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2014)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ (ဝက်နာရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အပေါ်တင်ဆက်မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်)